Ákàrà | Радоје Домановић
Enwere m nrọ dị egwu. Ọ naghị eju m anya na nrọ ahụ n’onwe ya, mana m na-eche ka m ga-esi nweta obi ike ịrọ nrọ maka ihe ndị jọgburu onwe ya, mgbe m bụ nwa amaala dị nwayọ na nke a na-akwenye ùgwù, nwa na-erube isi nke nne anyị hụrụ n’anya, Serbia nwere nsogbu, dịkwa ka ụmụ ya ndị ọzọ. N’ezie, ị maara, ọ bụrụ na m bụ ihe dị iche na ihe ọ bụla, ọ ga-adị iche, mana mba, ezigbo enyi m, m na-eme otu ihe ahụ onye ọ bụla ọzọ, yana maka ịkpachara anya n’ihe niile, ọ nweghị onye nwere ike ịha m mma ebe ahụ. Ozugbo m hụrụ bọtịnụ na-egbu maramara nke uwe onye uwe ojii ka ọ tọgbọ n’okporo ụzọ, m legidere anya na-enwu anwansi ya, ọ fọrọ nke nta ka m gafere, jupụta ncheta dị ụtọ, na mberede, aka m malitere ịma jijiji wee rute ekele; isi m hulatara ala n’onwe ya, ọnụ m gbasakwara n’ọchị ọchị ahụ mara mma nke anyị niile na-eyi mgbe anyị na-ekele ndị isi anyị.
– Ọbara dị mma na-agba na akwara m – ọ bụ ihe ọ bụ! – Nke a bụ ihe m chere n’oge ahụ wee jiri nlelị lelee onye na-agafe agafe nke ji akpachapụ anya tinye bọtịnụ ahụ.
– A nzuzu! – Ekwuru m okwu ilu, ma gbụọ ya ọnụ mmiri, wee jiri nwayọ gaa n’ihu, kasie ya obi site n’iche na ụdị ndị ahụ dị ole na ole; na enwere m ọńụ karịsịa na Chineke nyere m obi nụchara anụcha na ọbara mara mma nke ndị nna nna anyị.
Ọ dị mma, ị nwere ike ịhụ ugbu a ụdị nwoke m bụ, ọ dịtụghị iche na ụmụ amaala ndị ọzọ a na-akwanyere ùgwù, ị ga-enwekwa obi abụọ ị ga-eche etu ụdị ihe jọgburu onwe ya na nzuzu nwere ike isi mee na nrọ m.
Ọ dịghị ihe ọhụrụ mere m n’ụbọchị ahụ. Enwere m ezigbo nri abalị, emesịa m nọdụ na-atụtụ ezé m n’oge ntụrụndụ; ịppingụ mmanya m, mgbe ahụ, ebe m jiri ikike m dị ka nwa amaala jiri obi ike na akọ na uche mee ihe, agara m dinara wee were akwụkwọ ka m wee hie ụra ngwa ngwa.
N’oge na-adịghị anya akwụkwọ ahụ si n’aka m pụọ, na-emezurịrị ọchịchọ m na, mgbe arụchara ọrụ m niile, ụra buuru m dị ka onye aka ya dị ọcha.
Ozugbo ahụ, ahụrụ m onwe m n’okporo ụzọ dị warara nke juru apịtị nke na-agafe ugwu. Oyi, abalị abalị. Ifufe na-eku n’etiti alaka ndị na-adịghị amụ ihe, na-ebekwa ka agụba mgbe ọ bụla ọ metụrụ akpụkpọ ahụ gba ọtọ aka. Ihu igwe gbachapụrụ agbachapụ, dara ogbi, na-eyi egwu, na snow, dị ka uzuzu, na-afụ n’anya mmadụ ma na-eti ihu ya. Ọ bụghị mkpụrụ obi dị ndụ ebe ọ bụla. Ana m eme ọsọ ọsọ na mgbe ọ bụla m na -amịpụ n’okporo ụzọ apịtị dị n’aka ekpe, n’aka nri. M na-ama jijiji wee daa wee mesịa hapụ ụzọ m, m na-awagharị – Chineke maara ebe – ọ bụghịkwa abalị dị mkpụmkpụ, mana ogologo oge otu narị afọ, ana m ejekwa ije oge niile n’amaghị ebe.
N’ihi ya, m jere ije ruo ọtụtụ afọ wee bịa ebe dị anya, nke dị anya site na obodo m gaa n’akụkụ ụwa amabeghị, gaa n’ala ọzọ nke nwere ike ọ nweghị onye maara ya na nke m ji n’aka na enwere ike ịhụ ya naanị na nrọ.
Ịgagharị n’ala m bịara n’otu nnukwu obodo ebe ọtụtụ mmadụ bi. N’ọmà ahịa ka nnukwu igwe mmadụ nọ, oke mkpọtụ na-aga n’ihu, nke ga-ezu ịkụbido otu ntị. Etinyere m n’ụlọ ebe a na-eche ahịa ma jụọ onye nwe ụlọ ihe kpatara ọtụtụ mmadụ ji gbakọta ọnụ…
– Anyị bụ ndị dị nwayọ na ndị a na-akwanyere ùgwù,
– Ọ malitere akụkọ ya, – anyị na-eguzosi ike n’ihe ma na-erubere onye oka ikpe isi.
– Onye ọka ikpe ọ bụ ikike kachasị gị? – Ajụrụ m ya, na-agbagha ya.
– Onye ọka ikpe na-achị ebe a, ọ bụkwa ya bụ ikike kacha elu anyị; ndị uwe ojii na – abịa ma ọ gasia.
M chịrị ọchị.
– Kedu ihe ị na-amụrụ amụ?… Ị maghị?… Ebee ka i si bịa?
Agwara m ya otu ụzọ m si furu efu, na esi m n’ala dị anya bịa – Serbia.
– Anụrụ m banyere mba a ma ama!
– Onye nwe ụlọ kuru okwu n’ime onwe ya, na-ele m anya nke ọma, wee kwuo okwu n’olu dara ụda:
– Nke ahụ bụ ụzọ anyị, – ọ gara n’ihu, – onye ọka ikpe na ndị uwe ojii ya na-achị ebe a.
– Kedu ụdị ndị uwe ojii gị dị?
– Ọ dị mma, ụdị ndị uwe ojii dị iche iche – ha na-adịgasị iche, dịka ọkwa ha siri dị. A na-enwe ndị dị iche na ndị na-adịchaghị iche… Anyị bụ, ị maara, ndị dị jụụ na ndị a na-akwanyere ùgwù, mana ụdị ọnyà ọ bụla na-esi na agbata obi, ha na-emebi anyị ma na-akụziri anyị ihe ọjọọ. Iji mara ụmụ amaala anyị ọ bụla na ndị ọzọ onye ọka ikpe nyere iwu ụnyaahụ na ụmụ amaala anyị niile ga-aga n’Ụlọikpe obodo, ebe onye ọ bụla n’ime anyị ga-etinye akara n’egedege ihu ya. Nke a bụ ya mere ọtụtụ mmadụ ji agbakọta ọnụ: ka ha nye ndụmọdụ ihe ha ga-eme.
Ụjọ jidere m wee chee na m kwesịrị ịgbapụ n’ala a dị ịtụnanya ngwa ngwa m nwere ike, n’ihi na mụ onwe m, ọ bụ ezie na m bụ onye Serbia, emeghị ngosi dị otú ahụ nke mmụọ ịnyịnya, enwerekwa m obere ahụ iru ala maka ya!
Onye nwe ụlọ chịrị ọchị nke ọma, kụọ m aka n’ubu, wee kwuo nganga:
– E, onye bịara abịa, nke a ezuru gị ịtu ụjọ? Ka a sịkwa ihe mere, ị ga ga ogologo ụzọ iji chọta obi ike dị ka nke anyị!
– Gịnịkwa ka ị pụtara ime? – Ajụrụ m na ihere.
– Gịnị bụ ajụjụ a! Ị ga-ahụ ka anyị siri nwee obi ike. Ị ga-aga ogologo ụzọ ịchọta obi ike dị ka nke anyị, a sị m gị. Ị meela njem dị anya na anya wee hụ ụwa, mana ejiri m n’aka na ị hụbeghị ndị dike ka anyị. Ka anyị gaa ebe ahụ ọnụ. M ga-eme ọsọ ọsọ.
Ọ fọrọ obere ka anyị gawa mgbe anyị nụrụ, n’ihu ọnụ ụzọ, mgbape nke ụtarị.
M lepụrụ anya: enwere ihe ị ga-ahụ-nwoke nwere okpu na-enwu enwu, nke nwere mpi atọ n’isi ya, yi uwe dị oke mma, nọ n’azụ nwoke ọzọ nwere akwa mara mma nke ukwuu, nke ndị nkịtị. Ọ kwụsịrị n’ihu ụlọ ndị ọbịa ma onye ahụ na-agba ya gbadara.
Onye nwe ụlọ ahụ pụrụ, kpọọ isiala, nwoke ahụ yi uwe mara mma wee banye n’ime ụlọ gaa na tebụl a chọrọ mma pụrụ iche. Onye yi uwe nkịtị nọrọ n’ihu ụlọ ndị ọbịa wee chere. Onye nwe ụlọ kpọkwara ya isiala.
– Gịnị bụ ihe a niile? – Ajụrụ m onye nwe ụlọ, o juru m anya nke ukwuu.
– Ọ dị mma, onye batara n’ụlọ ebe a bụ onye uwe ojii nwere ọkwá dị elu, nwoke a bụkwa otu n’ime ụmụ amaala anyị ama ama, onye bara ọgaranya nke ukwuu, na onye hụrụ mba n’anya nke ukwuu, – onye nwe ụlọ gbakwụnyere.
– Ma gịnị kpatara o ji hapụ onye nke ọzọ ka ọ nọkwasị ya n’azụ?
Onye nwe ụlọ fegharịrị isi wee kporo m pụọ n’akụkụ. O nyere m ọnụ ọchị ọchị wee sị:
– Anyị na-ewere ya dị ka nnukwu nsọpụrụ nke ekwesighi ekwesighi! – Ọ gwara m ọtụtụ ihe ma e wezụga, mana enwere m obi anụrị nke na enweghị m ike ịpụta ha. Mana anụrụ m nke ọma ihe o kwuru na njedebe: – Ọ bụ ọrụ obodo mmadụ nke mba niile amụtabeghị inwe ekele!
Anyị bịara nzukọ na nhọpụta onye isi oche amalitelarị.
Ìgwè nke mbụ tinyere otu nwoke a na-akpọ Kolb, ọ bụrụ na m cheta aha ahụ nke ọma, dịka onye na-azọ oche ya; ìgwè nke abụọ chọrọ Talb, nke atọ nwere onye nke ya.
E nwere ọgba aghara dị egwu; otu ọ bụla chọrọ ịmanye nwoke nke ya.
– Echere m na anyị enweghị nwoke ka mma karịa Kolb maka oche nke nzukọ dị mkpa, – kwuru otu olu sitere na ndị otu mbụ, – maka na anyị niile maara nke ọma omume ọma ya dị ka nwa amaala na nnukwu obi ike ya. Echeghị m na ọ nwere onye nọ n’etiti anyị ebe a nwere ike ịnya isi na ndị mmadụ dị mkpa na-agbakarị ya ugboro ugboro…
– Kedu onye ị bu ekwu maka ya, -otu onye n’ime ndị otu nke abụọ tiri mkpu. – Onye ode akwụkwọ uwe ojii nke obere enwetụbeghị gi!
– Anyị maara ihe omume ọma gị bụ, – ka otu onye siri n’òtù nke atọ tiri mkpu. – Ọ nweghị mgbe ị ga-ata otu ụtarị na-ebeghị mkpu!
– Ka anyị dozie nke a, ụmụnna! – Kolb malitere. – Ọ bụ eziokwu na ndị ama ama nọ na-agba m azụ ka afọ iri gara aga; ha pịara m ihe, anaghị m eti mkpu ọ bụla, mana ọ nwere ike bụrụ na enwere ndị kwesịrị ekwesị n’etiti anyị. Enwere ike ịbụ ndị ka mma karịa.
– Mba, mba, – ka ndị na-akwado ya tiri mkpu.
– Anyị achọghị ịnụ maka nkwanye ugwu oge ochie! Ọ bụ afọ iri kemgbe Kolb nọkwasịrị n’elu, – olu sitere na otu nke abụọ tiri mkpu.
– Ọbara na-eto eto na ewere, hapụ nkịta ochie ka ha taa ọkpụkpụ ochie, – akpọrọ ụfọdụ sitere na otu nke atọ.
Na mberede, e nweghị mkpọtụ ọzọ; ndị mmadụ laghachiri azụ, aka ekpe na aka nri, iji kpochapụ ụzọ na ahụrụ m nwa okorobịa dị ihe dị ka iri atọ. Ka ọ na-erute nso, isi niile kpọrọ isi ala.
– Onye bụ nke a? – Agwara m onye nwe ụlọ m okwu.
– Ọ bụ onye ndu ama ama. Nwa okorobịa, mana na-ekwe nkwa. N’oge ọ bụ nwata, ọ nwere ike ịnya isi na ọ buru onye ọkaikpe n’azụ ya ugboro atọ. Ọ na-ewu ewu karịa onye ọ bụla ọzọ.
– Ha nwere ike họrọ ya? – Ajụrụ m.
– Nke a karịrị akarị, maka na ndị niile na-azọ ọkwa – ha niile emeela okenye, oge agafeela ha, ebe onye ọka ikpe nọkwasịrị n’azụ ya ụnyaahụ.
– Gịnị bụ aha ya?
Ha nyere ya ebe nsọpụrụ.
– Echere m, – olu Kolb malitere okwu, – na anyị enweghị ike ịchọta nwoke ka mma maka ọkwa a karịa Kleard. Ọ ka na-eto eto, ma ọ dịghị onye ọ bụla n’ime anyị tọrọ ya hà nhata.
– Nụrụ, nụrụ!… Kleard dị ogologo ndụ!… – olu niile dara ụda.
Kolb na Talb kpọgara ya ebe onye isi oche. Onye ọ bụla mere ụta miri emi, wee gba nkịtị.
– Daalụ, ụmụnna, maka nkwanye ugwu dị elu na nsọpụrụ a unu jiri otu olu nye m. Olileanya gị, nke dị n’aka m ugbu a, na-atọ gị ụtọ nke ukwuu. Ọ dịghị mfe iduzi ụgbọ nke ọchịchọ mba n’ime ụbọchị ndị a dị oke mkpa, mana m ga-eme ike m niile iji kwado ntụkwasị obi gị, iji gosipụta echiche gị n’eziokwu, na iru eru m nke ukwuu. Daalụ, ụmụnna m, maka ịhọpụta m.
– Ma ugbu a, ụmụnna m, enwere m olileanya na ị ga-ekwe ka m kwuo okwu ole na ole gbasara ihe omume a dị mkpa. Ọ dịghị mfe ịta ahụhụ ụdị mgbu a, ụdị mmekpa ahụ nke na-echere anyị; ọ dịghị mfe mmadụ iji ọkụ kpụ ọkụ n’egedege ihu ya. N’ezie, mba – ha bụ ihe mgbu nke ọ bụghị mmadụ niile ga-edili. Ka ndị ụjọ wee maa jijiji, ka ha jiri ụjọ tụọ egwu, mana anyị agaghị echefu nwa oge na anyị bụ ụmụ nna nna nwere obi ike, na ọbara dị mma na-agba na akwara anyị, ọbara nna nna anyị ochie, nnukwu ndị ọchịagha na-anwụ na enweghị na-eti nku anya maka nnwere onwe na maka ọdịmma anyị niile, ụmụ ha.
Ahụhụ anyị pere mpe, ọ bụrụ na ị na eche maka ahụhụ ha – anyị ga-akpa agwa dị ka ndị otu mebiri emebi na ndị ụjọ ugbu a anyị na-ebi ndụ dị mma karịa ka ọ dị na mbụ? Ezigbo onye ọ bụla ịhụ mba n’anya, onye ọ bụla na-achọghị ime ka ihere mee mba anyị n’ihu ụwa niile, ga-ebu ihe mgbu dịka nwoke na dike.
– Nụrụ! Nụrụ! Ogologo ndụ Kleard!
Enwere ọtụtụ ndị na-ekwu okwu ọkụ mgbe Kleard gasịrị; ha gbara ndị ahụ ụjọ ji ume ma kwughachi ihe Kleard kwuru. Mgbe ahụ, otu agadi nwoke ike gwụrụ nke nwere ihu gbara ajị, ntutu na ajị agba ya na-acha ka snow, rịọrọ ka ọ kwuo okwu. Ikpere ya na-ama jijiji ka nká, aka ya na-ama jijiji, azụ ya na-ehulata. Olu ya mara jijiji, anya ya na-enwu gbaa na anya mmiri.
– Ụmụaka, – ọ malitere, na anya mmiri na-asọda na acha ọcha ya, na ntì ya na apịa apị wee daa na afụ ọnụ ya na acha ọcha, – enwere m nhụjuanya na m ga-anwụ n’oge na-adịghị anya, mana ọ dị m ka ọ ka mma na ị gaghị ekwe ka ụdị ihere a bịakwute gị. Adị m otu narị afọ, ebiela m ndụ m niile na-enweghị nke ahụ!… Gini mere ekwesịrị iji masị akara nke ịgba ohu n’isi ọcha m na ike gwụrụ ugbu a?…
– Soro onye nzuzu ochie a! – onye isi oche tiri mkpu.
– Soro ya nọrọ! – ndị ọzọ tiri mkpu.
– Onye ụjọ ochie!
– Kama ịgba ụmụaka ume, ọ na-etinye mmadụ niile ụjọ!
– Ihere ya ga-eme ya n’isi awọ ya! Ọ dịrịla ndụ ogologo oge, ọ ka nwere ike na-atụ ụjọ – anyị ndị na-eto nwere obi ike karịa…
– Ala na onye ụjọ!
– Tụfuo ya!
– Soro ya nọrọ!
Ìgwè mmadụ iwe nwere obi ike, ndị na-eto eto na ahụ maka ọdịmma obodo gbabatara agadi nwoke ahụ wee malite ịpị ya, dọpụta ya, gbaa ya ụkwụ n’iwe ha.
Ha mechara hapụ ya n’ihi afọ ndụ ya – ma ọ bụghị ya, ha gaara atụ ya nkume na ndụ.
Ha niile kwere onwe ha nkwa na ha ga-enwe obi ike echi ma gosi na ha ruru eru inweta nsọpụrụ na ebube obodo ha.
Ndị mmadụ si na nzukọ pụọ nke ọma. Ka ha na-ekewa, ha sịrị:
– Echi anyị ga-ahụ onye bụ onye!
– Anyị ga-edozi ndị na-anya isi echi!
– Oge eruola ka ndị ruru eru ịmata onwe ha site na ndị na-erughị eru, ka onye ọ bụla na-eme ihe ike ghara inwe ike ịnya isi obi!
M laghachiri n’ụlọ ndị ọbịa.
– Ị hụla ihe e ji mee anyị? – onye nwe ụlọ m jụrụ m na nganga.
– N’ezie ahula m, – azara m na-akpaghị aka, na -eche na ike m agbahapụla m na isi m na-ama jijiji.
N’ụbọchị ahụ, agụrụ m otu akwụkwọ akụkọ gbara n’akwụkwọ akụkọ ha nke gbara ọsọ dịka ndị a:
– Ụmụ amaala, oge eruola ịkwụsị ịnya isi na ịma jijiji efu n’etiti anyị; oge eruola ịkwụsị ịtụle okwu efu nke anyị na-eji na eme nke ọma iji gosipụta omume ọma na ọzara anyị. Oge eruola, ụmụ amaala, ịnwale okwu anyị na igosi onye ruru eru n’ezie na onye na-erughị eru! Mana anyị kwenyere na ọ gaghị enwe ndị ụjọ ihere n’etiti anyị nke a ga-ebubata n’ike gaa ebe a kara aka. Onye ọ bụla n’ime anyị nke na-enwe mmetụta n’ọbara ya na-enwe nkụda ọbara dị mma nke ndị nna nna anyị ga-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ n’etiti ndị mbụ ga-eburu mgbu na ihe mgbu, jiri nganga na nwayọ, n’ihi na nke a bụ ihe mgbu dị nsọ, ọ bụ aja maka ọdịmma obodo anyị na maka ọdịmma anyị niile. Gaa n’ihu, ụmụ amaala, maka na echi bụ ụbọchị nnwale dị mma!…
Onye nwe ụlọ m lakpuo ụra n’ụbọchị ahụ ozugbo nzukọ gachara ka ọ ga-erute ebe a kara aka n’echi ya. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị gara ozugbo na ulọ Nzukọ Obodo ka ọ dịrị onye isi kwụ n’ahịrị nso.
N’echi ya, agakwara m Ụlọ Nzukọ Alaeze. Onye ọ bụla nọ ebe ahụ – nwata na okenye, nwoke na nwanyị. Ụfọdụ ndị nne na-ebute ụmụ ọhụrụ ha n’aka ha ka e wee mara ha ụdị ịgba ohu, ya bụ, maka nsọpụrụ, wee nweta ikike ka ukwuu n’ọkwa dị elu na ọrụ obodo.
A na-akwagharị ma na -ańụ iyi (na ha dị ka anyị Serbia, na enwere m obi ụtọ na ya), na onye ọ bụla gbalịsiri ike ịbụ onye mbụ n’ọnụ ụzọ. Ọbụna ụfọdụ na-ewere ndị ọzọ na akpịrị.
Onye ọrụ obodo pụrụ iche nke yi uwe ọcha na-acha ọcha, nke na-ata ndị mmadụ ụta nke ọma, tinyere akara.
– Ewela iwe, maka Chukwu, oge onye ọ bụla ga-abịa – ị bụghị anụmanụ, echere m na anyị nwere ike ijikwa na-enweghị ịkwagharị.
Akara malitere. Otu tiri mkpu, onye ọzọ sụrụ ude, mana onweghị onye nwere ike ịnagide ya na-enweghị ụda ogologo oge m nọ ebe ahụ.
Enweghi m ike ilele mmekpa ahụ a ogologo oge, yabụ m laghachiri n’ụlọ ndị ọbịa, mana ụfọdụ n’ime ha anọworị ebe ahụ, na-eri ihe ma na ańụ mmanya.
– Nke ahụ agwụla! – ka otu n’ime ha kwuru.
– Ọ dị mma, anyị etighị mkpu n’ezie, mana Talb na-eme mkpọtụ dị ka ịnyịnya ibu!… – onye ọzọ kwuru.
– I hụrụ ihe Talb gị dị, ma ịchọrọ ka ọ bụrụ onye isi oche nzukọ ahụ ụnyaahụ.
– E!, ị maghị!
Ha na-akparịta ụka, na-asụ ude na ihe mgbu ma na-akpasu iwe, mana na-anwa izobe ya onwe ha, n’ihi na ihere na-eme onye ọ bụla nke ịbụ onye ụjọ.
Kleard na-emechuo onwe ya ihu, n’ihi na ọ na-asụ ude, na nwoke aha ya bụ Lear bụ dike n’ihi na ọ rịọrọ ka enwee akara abụọ n’egedege ihu ya ma ghara inye ụda mgbu. Obodo ahụ niile ji nkwanye ugwu dị ukwuu na-ekwu maka ya.
Ụfọdụ ndị mmadụ gbapụrụ, mana onye ọ bụla ledara ha anya.
Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, onye nwere akara abụọ n’egedege ihu ya na-ejegharị na isi ya dị elu, na nsọpụrụ na nkwanye ùgwù onwe onye, ​​juputara n’ebube na mpako, na ebe ọ bụla ọ gara, onye ọ bụla hulatara kpoo okpu ya iji kelee dike nke ụbọchị ahụ.
Ndị nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka sochiri ya n’okporo ụzọ ka ha hụ nwoke kacha ukwuu na mba ahụ. Ebe ọ bụla ọ gara, mkpọtụ sitere n’ike mmụọ nsọ sochiri ya: “Lear, Lear!… Ọ bụ ya!… Nke ahụ bụ dike ahụ nke na-ebeghị mkpu, onye na-enyeghị ụda mgbe ụdị abụọ masịrị n’egedege ihu ya!” Ọ nọ n’isi akụkọ nke akwụkwọ akụkọ, na-eto ma na-eto ya.
O kwesịkwara ịhụ n’anya ndị mmadụ.
N’ebe niile ana m ege otuto dị otu a, amalitekwara m inwe mmetụta nke ọbara Serbia ochie, nke mara mma na -agba na akwara m, ndị nna nna anyị bụ ndị dike, ha nwụrụ n’elu osisi maka nnwere onwe; anyị nwekwara oge gara aga nke dike anyị na Kosovo anyị. Enwere m obi anụrị na mpako mba na ihe efu, na-achọsi ike igosipụta ụdị mmadu m nwere na iji ọsọ gbaga n’Ụlọ Nzukọ Obodo wee tie mkpu:
– Gini mere ị na-eto Lear gị?… Ị hụtụbeghị ezi ndị dike! Bịa hụ n’onwe gị ihe ọbara Serbia mara mma dịka ya! Tee ụdị akara iri n’isi m, ọ bụghị naanị abụọ!
Onye ọrụ bekee yi uwe ọcha wetara akara ya n’akụkụ ọkpọiso m, amalitere m… etetara m na nrọ m.
Eji m egwu tụọ aka n’egedege ihu m wee gafere onwe m, na-eche ihe ịtụnanya ndị na-apụta na nrọ.
– Ọ fọrọ nke nta ka m kpuchie ebube Lear ha, – echere m na, afọ juru m, tụgharịa, ọ dịkwa m nwute n’ụzọ ọ bụla na nrọ m abịabeghị na njedebe.
Na Belgrade, 1899.
Ознаке:ala nna, ala nne, ịbụ nwa amaala, ọbụbụ ọnụ, ọkà okwu, ọkwá, ụjọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, bọtịnụ, dike, ebube, ewu ewu, ndị mmadụ, nna nna, nrọ. dike, nwa amaala, nzukọ, obi ike, ohu, onye mba, onye ndú, onye uwe ojii, uru